किन पाल्छन दारीवालाहरु दारी अनि किन काटछन् नपाल्ने हरु ? ~ Khabardari.com
किन पाल्छन दारीवालाहरु दारी अनि किन काटछन् नपाल्ने हरु ?
धेरैको भनाइ छ- मानिस विरक्तिएर दाह्री पाल्ने गर्छन्। प्रेममा असफल भएर, रोगले च्यापेर, विविधखाले समस्याले जेलिएर वा दाह्री काट्ने पैसासम्मको अभावमा पनि मानिसले दाह्री नकाट्ने गरेका सुनिन्छन्। विविध अर्थको एउटै निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ केही न केही समस्या लुकेको छ, दाह्री नकाट्नुमा।
इतिहासक्रममा दाह्रीलाई परिपक्वता, बौद्धिकता, पुरुषत्व वा उच्च हैसियतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ, नकारात्मक पक्षमा दाह्री नकाट्नुलाई मानिसको सामान्य शारीरिक सरसफाइप्रतिको बेवास्ताका रूपमा लिइने पनि गरिएकै छ।
अलेक्जेन्डर महान्को पालामा झन्डै तीन हजार वर्ष अघिदेखि सुरु भएको दाह्री काट्ने प्रचलनअनुसार दाह्री काटेका मानिस सफाचट तथा आकर्षक देखिने र दाह्री पाल्ने मानिस फोहोरी वा अनाकर्षक हुने आमसोच अहिले पनि व्याप्त नै छ। भनिन्छ, ''युद्धका समयमा शत्रु पक्षका सैनिकले आप\_mना सैनिकका लामा दाह्री तानेर आक्रमण गर्न नसकून् भनेर अलेक्जेन्डरले दाह्री काट्न प्रोत्साहित गरेका थिए।
हिन्दु धार्मिक पुराणलाई आधार मान्ने हो भने सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलगायत ऋषि, तपस्वीहरूको परिचयमा लामालामा दाह्री पनि थपिन्छन् । हाम्रै खप्तड स्वामीको सेताम्मे दाह्रीले उनको तपस्वी व्यक्तित्वमा अतिरिक्त आकर्षण बिन्दु थियो। योगगुरु रामदेवदेखि आध्यात्मगुरु रविशङ्कर, हरिद्वार होस् वा पशुपतिका सबै साधु, सन्त, योगीमुनीहरू सबै दाह्रीवाल बाबाहरू। शिख, यहुदी, इस्लाम आदि धर्मका कुरा गर्दा पनि दाह्रीको धार्मिक महत्त्व त्यत्तिकै छ।
यस्तै विभिन्न युगमा पनि वैज्ञानिक, विचारवेत्ता, दार्शनिक, साहित्यकारलगायत व्यक्तित्वको अनुहारमा पनि दाह्रीले राज गरेको पाइन्छ। चाहे ती प्लेटो हुन् वा सोक्रेटस, कार्लमाक्र्स हुन् वा एन्जेल, अब्राहम लिङ्कन हुन् वा रूसका लेनिन, क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो सबै दाह्रीका पुजारी। सेक्सपियरले पनि दाह्रीलाई मन पराए चाल्र्स डिकेन्स पनि के कम उनले दाह्रीको राम्रै स्याहार गरे। राजा, महाराजाले कमै मात्रामा दाह्री पाल्ने गर्छन् तर बेलायती राजकुमार विलियमको दाह्रीको राम्रै चर्चा भयो। नेपालकै कुरा गर्दा पूर्वयुवराज दीपेन्द्रले पनि झयाप्पै दाह्री पालेका थिए, एक समय।
कम्युनिस्ट राजनीतिक विचारधाराका कुरा गर्ने हो भने दाह्री पाल्नु पनि सिद्धान्त अनुशरण गरेजत्तिकै मानिन्थ्यो, एक बखतमा नेपालमा। र, भनाइ पनि थियो पञ्चायती व्यवस्थाताका दाह्री पाल्ने सबैलाई कम्युनिस्ट कोटरीमा राखिन्थ्यो, अघोषित रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई दाह्री पाल्न प्रतिबन्धित जस्तै थियो।
यस्तै हलिउड तथा बलिउडका कलाकारहरूमा पनि दाह्रीको लोकपि्रयता त्यत्तिकै छ। हलिउड चलचित्र इन्डियानामा जोन्सको बाबुको भूमिकामा सिन क्यारीको हुन् वा चलचित्र म्याक्सिसमा अस्ट्रेलियन कलाकार रसेल क्रो। यसैगरी बलिउडमा नाना पाटेकरको भूमिका होस् सबैले दाह्रीमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। चलचित्र पाइरेटस् अफ दि क्यारिबियनका अभिनेता जोनी डिपको भूमिका दाह्रीका कारण पनि विशेष छ। यी चलचित्रको व्यापार पनि अपार नै छ।
क्यानडाको लेथबि्रज विश्वविद्यालय तथा न्युजिल्यान्डको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयद्वारा हालै गरिएको एक अध्ययनमा पनि दाह्रीको सम्बन्ध पुरुषको व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। दाह्री काट्दा देखिने बच्चाको जस्तो अनुहारको दाँजोमा दाह्री पाल्दा पुरुषको सामाजिक हैसियत बढ्नुका साथै मानिसले दाह्रीवालासँग आल्तुफाल्तु कुरा गर्न पनि हिच्किचाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
यीबाहेक पनि केही यस्ता कारण छन् जसका कारण पुरुषहरू दाह्री पाल्छन् भन्ने गरिन्छ। गर्मीमा कपाल नभएको तालु रन्केजस्तै दाह्री हुँदा अनुहार गर्मीले रन्काउँदैन। यस्तै जाडोमा गाला तताउन सघाउँछ दाह्रीले। नहाँस्नुस् तर यो पनि सत्य हो दाह्री भयो भने पाखुरा तथा काँधतिर रगडेर कन्याउन सजिलो हुन्छ। दाह्रीप्रति आकषिर्त हुने युवतीको सङ्ख्या पनि कम छैन, उनीहरूका सोचमा दाह्रीवाला युवकहरू साहसिला तथा दृढ निश्चयी हुन्छन्। दाह्रीलाई रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिका रूपमा पनि हेरिन्छ, एक भनाइअनुसार रोगका कीटाणु दाहीलगायत शरीरका रौँहरूका कारण शरीरभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनन्।
आफूलाई विशेष देखाउन दाह्रीवालाहरू दाह्री काट्नुलाई अप्राकृतिक विषयवस्तु भएको धारणा पनि राख्छन्। दाह्री काट्नु सामान्य विषय र दाह्री बढ्न दिनु असामान्य विषय भएको उनीहरू ब्ाुझाइ हुन्छ। एउटा अर्को कुरा पुरुष भन्दैमा सबैले दाह्री पाल्न सक्ने हैसियत भने राख्दैनन् किनकि यसको सम्बन्ध वंशाणुगत पक्षसँग पनि छ, सबै महिला आमा बन्न नसकेजस्तै।
कुरा जेजस्ता भए पनि दाह्री पाल्ने वा काट्ने व्यक्तिगत इच्छामा भर पर्ने हुन्। कसैको व्यक्तित्वमा दाह्री थप आकर्षण हुन सक्छ भने अरूकोमा सफाचट अनुहारले राम्रो प्रभ्ााव पार्न सक्छ।
Posted in: beard,dari,information,Tips